Master plan Abaay Tsahaayee maqaa jijjiirratee መሪ ፕላን maqaa jedhuun hojiirra oolee jira!! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosMaster plan Abaay Tsahaayee maqaa jijjiirratee መሪ ፕላን maqaa jedhuun hojiirra oolee jira!!
Kutaan magaalaa 10 ture Koyyee Faccee, Boolee Arraabsaa fi Yeekkaa Abbaadoo dabalachuun kutaa magaalaa 13 ta’anii dhufanii jiru. Kutaalee magaalaa sadan kun qofti heektaara 16,000 caalu qabatanii Finfinneetti makamanii jiru. Dereje Begi kutaa magaalaa KOYYEE FACEE argitee?
Moottummaa naannoo oromiyaatti dhufe keessa kan akka SHIMALIS cuqqalamaafii dhakaa bu’uuraa qofa ta’ee hafe hin garree.
Marii Weellistoota keenya OBS irratti godhame irratti miidhaa gandummaa fi waa’ee warra gandumaa fidee Zarihuun Wadaajoo dubbate baay’ee natti tole. Diinni Oromoo yeroo har’aa kana warra gandumma leellisu ta’uu sabni beeke jira.
Ammas taanan Oromoon tokko. Akka argaa jirrutti gandummaan gaaddisa yakkamtoonni jalatti dheesan ta’eet jira.
Waajjira keessatti kan hojii dadhabsiise himatame,Kan seera cabsee himatame yakka isaa kana dhoksuuf ani wanan warra akkasi ta’eef warri akkasii narratti ka’an jedhee garee ijaare yakkaan keessa dhokata. Jibba namoota dhuunfas achi jalatti baafachuu barbaada.
Kanaafu handummaan hamtuu fi meesha diina ta’uuti mul’ata.
Karaa birootin immoo diiggan Oromoon oomisha alagaan omishee nutti gadidhiise kan qabeenya keenya fixee fi namummaa keenya gadi buusu ofirraa beekunis barbaachisa akka ta’ee sayyoo Dandanaa ibsee jira.
Amantiinis duula biraa ta’uun nuuf himan. Akka walii galaatti dubbiin jarri dubbate nama gurra qabuuf baay’ee cimtuudhu.
Weellistoota keenya nan galateeffadha
Dereje Regassa Yami irraa
#Inbox Finfinnee irraa
Lafa kana Takele Umatu warra seeran ala qabatan irraa deebise. Kutaa magaala #nifaas silk laaftoo aanaa 09 jala jira. Amaarri addaan qircataniiru jette isa ati posti goote argeen mirkaneefachuuf achi dhaqe. Baay’ee nama #gaddisiisa. Wantiin dhagahe maqaa parkingitiin mana jireenyatiif akka addaan qircatan dhugaa naaf bahan. Kutaa magaala kana keessatti lafti duraan warra seeran ala qabataan irraa deebi’ee hedduu isaa amaarri maallaqa gudda fund gochuun hoggantoota lafaa sadarkaa aanaati hanga kutaa magaalaf magaala jiran qabachuun akka akka laficha saamaa jiranis odeeffadheera.
gamoo warra #tigree trans ethiopia bira jira.
ATWO . kamiinnii kun immoo ……?#PBO
Obsaan Aanan goromsaa dhuga yaa boontuu tiyya
Roorroo heddu dandeette Obsaan as geette deesse tiyya
Barro baranni keeti…gadatu teeti……
Nigoo Sikkoo Mandoo